ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက စစ်စခန်းချခဲ့သည့် White City သို့ လာရောက်သည့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးက ၎င်း၏ ဖ?? - Yangon Media Group
အင်းတော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းတော် မြို့နယ်၊ ဟဲနုကျေးရွာရှိ ကမ္ဘာကျော် ခံတပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် မြို့တော်ဖြူ(White City) ၌ ကျဆုံးသွားသည့် ၎င်း၏ဖခင်အတွက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးက နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ငွေလှူဒါန်း ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
” White City နေရာကိုလာရတာက တပ်မဟာ (၇၇) မှာ စစ်သားဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့အဖေ ဂျပန်နဲ့တိုက် တဲ့စစ်ပွဲမှာကျဆုံးခဲ့တော့ သူ့အဖေကျဆုံးတဲ့ White City ကိုလာ ရောက်ကြည့်ရှုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေပြီး မော်လူးမှာရှိတဲ့ Chindist Memorial Museum ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါတယ်”ဟု ခရီးသွားလမ်းညွှန် ကိုစိုးပိုင်ဦးက ပြော ကြားသည်။
Robert Withey နှင့်အဖွဲ့မှာ ဟဲနုတောင်ကုန်းပေါ်ရှိ Chindists အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်နေရာ မှ မော်လူးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ယာယီဖွင့်လှစ်ထားသည့် ခြင်းဒစ်အထိမ်းအမှတ်ပြတိုက်၌ ပြသထားသည့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန် အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များ၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနှင့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများကို ဝင်ရောက် လေ့လာကြည့်ရှုကြပြီး Chindists Momerial Museum ပြတိုက် ဆောက်လုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်နေသည့် မော်လူးရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းသို့ အလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ဝဝ လှူဒါန်းရာ အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးချိတ်က လက်ခံရယူသည်။
ရှမ်းနှစ်သစ်ကူး ကြိုဆိုပွဲနှင့် ကောက်သစ် မိတ်ဆုံစားပွဲ ဖွင့်ပွဲကို ရှမ်း၊ အာခါနှင့် လားဟူ
ဖန်နီ မုန်တိုင်းကြောင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းသွား ရေကြောင်းခရီးစဉ်များ ရပ်နားထားရ
FDA ညွှန်ချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာသန်းထွဋ်ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေဖြင့် စွဲချက်တင်
တာချီလိတ်မြို့တွင် လမ်းလျှောက်လာသည့် ထိုင်းနိုင်ငံသား တစ်ဦးထံမှ စိတ်ကြွဆေးပြားများဖမ်း??